Maali: madaxwaynaha oo magacaabay garsooryaasha Maxkamadda Dastuuriga ah - Tilmaan Media
Madaxwaynaha dalka Maali Ibrahim Boubacar Keita ayaa maxkamadda dastuuriga digreeto ugu magacaabay sagaal garsoore, arintaan ayaa qayb ka ah isku dayo madaxwaynuhu kudoonayo in ku qaboojiyo xaaladda siyaasadeed oo muddo bila ah kacsanayd.
Madaxwayne Keita ayaa waajahaya mucaarado aad u xoog badan taasoo lagu doonayo inuu xilka madaxwaynenimo iska cassilo, arintaas oo uu madaxwaynuhu kadhaga adaygayo.
Waxaa muddo dhawr bilood ah dalkaas ka socday mudaharaadyo dhiig ku daatay. Rabshadaha ayaa bilawday kadib markii doorashooyinkii baarlamanka ee dalkaas kadhacay bilihii Maarsho iyo Abriil ee lasoo dhafaay lagu eedeeyay in xisbiga talada hayya ee uu hogaamiyo madaxwayne Ibrahim Boubacar Keita uu doorashada ku shubtay.
Waxaa samaysmay dhaqdhaqaaq mucaarad ah oo kakooban axsaab iyo ururo kala duwan oo kumidaysan in Maali laga sameeyo isbaddal siyaasadeed oo ballaaran. Mucaaradka kala duwan waxaa hogaamiye u ah wadaadka lagu magacaabo Mahmoud Dicko.
Bishii lasoo dhaafay ee Luulyo mudaharaadyo rabshada watta oo saddex maalmood socday waxaa kudhintay 11 qof.
Ururo goboleedyo uu kamid yahay ururka ay kumidoobeen dalalka Galbeedka Afrika (ECOWAS) ayaa ugu baaqay 27 bishii Luulyo ee tagtay in la sameeyo dowlad wadaag ah si xal siyaasadeed loo gaaro.
Wali macadda sida xaalku noqon doono gaar ahaan marka la eego sida madaxwaynuhu ugu dhagan yahay xukunka iyo mucaaradka oo doonayo isbaddal lagu sameeyo sistamka siyaasad iyo dowladeed ee dalkaas dagaaladu daashadeen.
Taliyihii ciidanka ilaaladada madaxtooyada Puntland oo Galkacyo lagu dilay